Fanamelohana ho faty ireo tantsaha malagasy noho ny ady tany · Global Voices teny Malagasy
Fanamelohana ho faty ireo tantsaha malagasy noho ny ady tany
Voadika ny 14 Jolay 2008 4:31 GMT
Vakio amin'ny teny عربي, Français, 日本語, 繁體中文, 简体中文, Español, English
Samihafa ny heloka nomen’ny Fitsarana ambaratonga voalohany tao Miarinarivo ireo tantsaha 21 avy ao Ankorondrano Analavory (90 km andrefan’Antananarivo) noho ny fihokoana nataon’izy ireo noho ny ady tany nifanaovan’izy ireo tamina tompon-tany iray. Ho fanoheran’izy ireo ny fanalana azy tamin’ny tany izay heveriny fa efa azy ampolony taona izao dia nifandona tamin’ny mpitandro ny filaminana tonga hanaisotra azy ireo avy amin’ny tany niadiana ireo tantsaha ireo. Niafara tamina fahafatesana mpitandro filaminana 2 sy vehivavy 1 anisan’ny fokonolona moa izany gidragidra izany.
Efa nivoaka 8 volana lasa izay ny didim-pitsarana saingy ny fanentanana samihafa hamotsorana ny helok’izy ireo no nampiverina indray ity raharaha ity hanaitra ny fifantohan’ny olona. Hita an-tserasera amin’ny alalan’ny dinika sy ny bolongana moa ny adihevitra momba izany.
Fa mialoha ny hitaterana ireo fijery samihafa ireo, dia ilaina aloha ny mampahafantatra ny voalazan’ny lalàna (na ny ara-dalàna) nahatonga ny fifandirana.
Araka ny voalazan’ny L’Express de Madagascar dia mpandraharaha iray no tompon’ilay tany mirefy 172 ha izay novidiany hananganana tetikasam-pampandrosoana iray (loharanom-baovao tsy voamarina no nilaza fa hananganana toeram-pialamboly ilay izy). Na izany aza, dia efa nanamainty molaly ny tany ireo tantsaha ireo hatramin’ny taona 70 rehefa tsy fantatra mazava intsony ny mombamomba ny tena tompontany ara-dalàna.
Toy izao manaraka izao ny fanamelohana azon’ireo tantsaha 21 ireo: 12 nomelohina ho faty, 6 voasazy hiasa an-terivozona 12 taona, 1 migadra herintaona ary ny 1 hafa kosa herintaona sazy mihantona.
Mpiserasera iray, Raharimbahoaka Andriahobijaona, no manazava ao amin’ny takelaka facebook mangataka ny hamotsorana ny helok'ireo tantsaha ireo fa efa nanasonia ny fehin-kevitra hanafoanana ny fanamelohana ho faty (natsangana tamin’ny 1958 teto Madagasikara) ao aminy i Madagasikara na dia mbola tsy voaisotra ao amin’ny Lalampanorenana aza izany, ny fanamelohana ho faty 53 nodidiana hatramin’io fotoana io tokoa manko dia « niofo » ho figadrana mandra-pahafaty. Hoy izy nandresy lahatra (fr):
Eo anatrehan’ny fitsarana, raha jerena ny zava-misy sy ny porofo, dia ny mpanambola hatrany no mahazo rariny. Tsy fahadisoan’ny fitsarana izany, fa misy kosa ny lalàna efa nilaozan’ny toetr’andro ankehitriny […] ny tena olana dia lovan-kolontsaina [mifandaka amin’ny fanontoloana] ny raharahan-tany eo amin’ny fomban-drazana malagasy.
Nampiany koa hoe:
Ilaina tokoa araka ny eritreritro ny mampiasa ny gazety vahiny, manetsika ny malagasy ampielezana ary ny fampahalalam-baovao rehetra. Satria manaraka akaiky izay mitranga eto an-toerana sy any an-kafa ny ao amin’ny fiadidiana ny repobilika. Ny fomba sy ny soritra ihetsehana no tena zava-dehibe. Tsy maintsy manaja ny lalàna isika eo ampiraharahana izay tokony atao amin’izao fotoana izao.
Efa natao ny fanangonan-tsonia hanafahana ireo tantsaha ireo ary efa natolotry ny French Association for friendship and solidarity with the African People na Association Française d’Amitié et de Solidarité avec le Peuple Africain (AFASPA na Fikambanana Frantsay Minamana sy Miray Hina amin’ny Vahoaka Afrikana) ny filoha Marc Ravalomanana sy ny Minisitry ny Fitsarana Bakolalao Ramanandraibe Ranaivoharivony.
Ny tena nampakaran’ireto mpanohana ny hanafahana ny tantsaha malagasy ireto ny feony dia ilay didy eo anatrehan’ny fahasarotan’ny tantaran’ny ady tany miraikitra amin’iny faritra iny. Nazavain’Atoa Jean Razafindambo fa ny vanim-potoanan’ny fanjanahantany no tena nampiteraka ny savorovoro raha heverina izay tena tompon’ny tany ankehitriny. Nanolotra izao vahaolana izao ny lehilahy (fr):
Moa tsy ny fifanakalozan-kevitra no mahamaika kokoa noho ny famaizana raha ady tany no resahana ? […] Tokony hividy ireo tany antoka ireo amin’ny vidiny ara-drariny ny Fitondrana eto Madagasikara ary hanavao ny fizakantany tokoa sady handray ho zava-dehibe ny lafiny tantara fa tsy izay tahirin-kevitra nolovaina tamin’ny fanjanahantany ihany.
Tsy maintsy manambara ny hevitro aho etoana ! Araka ny fijeriko ny fototry ny ankamaroan’ny aditany amin’izao fotoana izao dia tsy avy amin’ny vanimpotoanan’ny fanjanahantany fa avy amin’ny tarigetran’ny mpitondra fanjakana malagasy tamin’ny vanimpotoanan’ny fanindrahindrana ny hoe izay manamainty molaly ny tany no tompon’ny tany. Nihazakazaka namboly teny amin’ny tany efa manan-tompo ny sasany na dia fantany izao aza fa efa manatompo io tany io. Dia toy izany ihany koa ny amin’ity raharaha ity. Tsy tompon’ny tany na nandova ny tany ry zareo fa tonga dia namboly tsotra izao satria izay mamboly ny tompony avy eo. Mariho tsara fa hatramin’ny taona 70 fa tsy hatramin’ny taona 60 nahaleovan’i Madagasikara tena no tonga teo ireo olona ireo. Raha tanim-panjakana no nanaovana izany dia hafa fa raha tany efa manatompo kosa tsy mety loatra. Raiso hoe ny taninao ara-panjakana (efa nananana taratasy hatramin’ny vanim-potoanan’ny fanjanahatany sady nampiarahana tamin’ny tanim-pasana ho fanaporofoana fa efa an’ilay olona nialoha ny fahatongavan’ny taratasy fanamarinana maha-tompon’ny tany) izao no bodoin’ny olona iasana ka takiany ho azy satria niasa ny tany izy ? Aiza ny rariny amin’izany ?
Mariho ihany koa fa efa nisy ny fampivarotana ireo olona ireo ny tany (tamin’ny vidiny mora aza) saingy tsy nanaiky hividy indray mandeha izy ireo satria mihevitra fa tompon’ny tany avy hatrany rehefa mamboly ny tany. Izay vao nividy io tany io ilay mpandraharaha nampanala azy ireo tamin’io tany io. Manaraka izany, efa nisy ny fanomezana ireo olona ireo tany hafa ka nisy ny nanaiky izany nifindra tany fa ireto kosa tsy te-hahalala fa na velona eo na maty eo araka ny dina nifanaovany.
14 Jolay 2008, 04:33
Manaraka izany, tena manomboka mampiahiahy tokoa ankehitriny ity fomban’ny vahoaka “miara-mirona” ity. Rehefa tonga amin’izay hoe “Miray hina” izay, na amin’ny tsy ara-dalàna, eny, tsy ara-drariny aza, dia mahavita zava-doza tokoa. Vao tsy ela ohatra ilay trano sy fiara efatra nodoran’ny fokonolona tetsy Imerintsiatosika fa nisy honohono hoe mpangalajaza hono ilay tompon-trano.
Ny anton’io dia tsy matoky ny mpitandro ny filaminana sy ny fitsarana intsony ny vahoaka, ka maka ny toeran’ireto farany rehefa eritreretiny ho miaro ny mpanao ratsy indray ny mpitandro ny filaminana sy ny fitsarana. Aina mpitandro filaminana roa sy olon-tsotra iray no afaka, koa tsy azo atao ambanin-javatra izay. Dia mba mila eritreretina ihany koa hoe raha rainao ohatra no mpitandro filaminana no asany, tsy nitsitsy andro sy aina nanompo ny firenena ka nandeha tamin’ny rariny sy hitsiny hampanjaka ny rariny araka ny baiko sy adidy iantsorohana, no namoy aina noho ny rotaka nataon’ny antokon’olona maromaro?
Sarotra amiko noho izany ny mamaky ilay voambolana hoe famotsoran-keloka, raha fanalefahana kosa dia ho moramora nosainina kokoa. Na izany aza, ilaina ny fifamelana sy ny fandrindram-pihavanana, eo amin’ny fokonolona sy ny mpitandro ny filaminana, ary eo amin’ny fokonolona sy ny firenena ihany koa, ka heveriko fa làlana tokony holalovana, mialoha izay ho famotsoran-keloka ny :
1) Fiaiken’ny fokonolona ny fahadisoany teo anatrehan’ny lalàna, miampy fanomezan-toky ny tsy hinia hanohitra ny lalàna intsony.
2) Ny Idealy, dia tokony ho avy any amin’ny havan’ireo namoy ny ainy noho ny rotaka, sy ny tompon’ny tany no mangataka ny famotsoran-keloka ho an’ireo fokonolona. Raha vitan’ny mpanelanelana ny mandresy lahatra ireo ankolafiny roa ireo, tsy ho sarotra ho an’ny Filohan’ny Repoblika mihitsy ny hanome famotsoran-keloka.
Tahaka ny “mission impossible” izany, kanefa toy ny hasarotr’izany ihany koa ny hasarotry ny fanerena ny Filoham-Pirenena hanome famotsoran-keloka, satria sady manery azy hisalovana ny asan’ny Fitsarana, no manery azy hamporisika ankolaka ny herisetra amin’ny ankapobeny ataon’ny vahoaka ihany koa, sady manamaivana rahateo ny aina very izay tsy ananany fahefana akory.
14 Jolay 2008, 05:33
Misotra ny Jentilisa aloha nandika ity post ity mailaka dia mailaka.
Ilay hevitra tohiny koa (Dotmg) dia tena mafinaritra ary raha hazoko natao no nandika azy indray…. 😉
14 Jolay 2008, 18:06
Misy fanontaniana tsy misy mpametraka mihintsy, de tsy misy mamaly koa mazava ho azy.
1) Ireo fokonolona ireo de tsy nanana basy na 1 aza. Ka ahoana no nahafaty ireo polisy? Tsy voafehin’ny mpitandro filaminana izany ny toe-draharaha? Fa angaha moa tsy efa nianatra manokana ny tranga toy itony ny zandary? ( mariho fa pôlisy le maty). Iza no nampaniraka ireo pôlisy ireo?
2) Iza no tompon’ny tany nividianana’ilay mpandraharaha azy? nahoana no aty @ 2007 vao esorina ny olona? Tsy azo toriana ho mpiray tsikombakomba amin’ireo olona ireo koa ve izy? Sy izay rehetra mpitondra nifandimby teo ka tsy nanala ireo olona ireo hatramin’ny voalohany?
3) Ny heloka rehetra , rehefa tsy nametrahanao fitoriana tao anatin’ny fotoana voafetra, de tsy azo iverenana intsony. Raha nisy naka ohatra ny bisikiletanao, ka tsy nametraka fitoriana ianao, saingy hitanao le izy 20 taona aty aoriana, de hihazakazaka hametraka fitoriana ianao mba angalanao azy, de holavin’ny fitsarana izany satria efa dila ny fe-potoana (prescription), ahoana ny amin’ny tany? Raha 30 taona ny tompon’ny tany no tsy mampiasa ny taniny fa avelany ho lava volo eo fotsiny, tsy tokony amboarina ve ny lalàna mba hahatonga ny titre-ny ho tratran’ny prescription extinctive?
21 Jolay 2008, 14:48
Marina tokoa fa tsy nanana basy ireo fokonolona ireo saingy efa niomana tamin’ny fitaovana hafa toy ny vato indrindra indrindra. Maro ireo olona nivondrona ireo nahatonga ny reninkeloka iray manao hoe fiokoana. Sarotra ihany ny mandrava izany. Ny heveriko tsara avoitra ihany koa dia tsy nampiasa basy ihany koa ny mpitandro ny filaminana fa fitaovana amin’ny fanosehana mpanao fihetsiketsehana izay efa nahery setra moa. Enga anie aho mba tsy ho diso amin’io filazako io.
Na izahay aza tao amin’ny Lycée Moderne Ampefiloha dia nitoraka ny mpitandro ny filaminana ny volana avrily 1989 raha tsy diso daty aho. Nambenana avokoa ny Lycée rehetra tamin’izany fotoana izany satria nahiahiana hipoaka ny raharaha vola may. Kirizy tamin’ny naharesy ny mpanohitra tamin’ny fifidianana filoham-pirenena manko ny tanora tahaka anay tamin’izany fotoana izany ary ef atsapan’ny fitondram-panjakana tsara izany.
Hiverina amin’ity raharaha eto ity indray aho, tamin’ny voalohany dia mety tsy ho tsapan’ny tompon’andraikitra tsara ny vaikam-panoherana hataon’ny fokonolona ka nahafaty ny mirahalahy tamin’ny mpitandro ny filaminana. Ny nahafaty ilay vehivavy sivily iray aza dia noho izy mbola nitady hijapy ihany koa ny fiaran’ny mpitandro ny filaminana kanjo tsy nahay. Hatreo no tsy nampiasa herisetra ny mpitandro ny filaminana… ny tohiny dia tsy maintsy niverina niaraka tamina fiarabe maromaro amin’izay ny mpitandro ny filaminana ary heverina ho maro an’isa kokoa noho ny mpanao fihetsiketsehana nanao herisetra aza.
Momba izay nivarotra ny tany kosa aloha dia ilay mpandraharaha nividy ny tany no tena tsara nanontaniana. Ny resaka mpitondra fanjakana indray dia fantatra tsara fa ny mpitondra nanomboka tamin’ny repôbilika faharoa no tena tsy niraharaha mihitsy izay fibodoana nataon’ny nolazaina fa “madinika”. Vokany Jereo ohatra eo 67ha afovoany andrefana. Somary avaratra atsinanan’ny FLM 67ha na avaratry ny KOFA (KOperativa FAmatsiana tamin’nyandrony) eo na atsimon’ny Akaninjaza Lovasoa an’ny AREMA fa nisy fanorenana lehibe lasan’ny “tra-boina” tanteraka eo. Tsy mandainga mihitsy ny hita eny na amin’izao fotoana izao aza ianao hijery eny.
Tamin’ny andro naha-Ben’ny Tanànan’Antananarivo ny filoha ankehitriny ihany koa dia nisy didim-pitsarana mazava tsara nanambara ny tokony ialan’ny mpibodo ny tanin-dRamarosandy amin’io faritra Isotry io. Fitsarana efa nifandrirarirana hatry ny ny ela fa tsy nampiharin’ny mpitondra taloha mihitsy ny didy fanalana ireo mpibodo ny tany. Inona no sorabaventy narantirantin’ny mpibodo tany tamin’izany fotoana izany? “Vahoaka sa Olona Iray?”…
Efa nanoratra ihany aho fa tamin’ny voalohany dia nokasain’ny tompony taloha amidy amin’ny fokonolona ny tany saingy tsy niraharaha izany ny fokonolona. Eo amin’ny raharaha malagasy tsy maintsy misy hatrany ny fanelanelanana aloha. Matoa miditra fitsarana ny raharaha efa goavana be ary efa mizotra amin’ny fanariana tanteraka ny fihavanana. rehefa misy manko ny resy sy ny mpandresy amin’ny ankapobeny (ho an’ny malagasy aloha) dia tsy hisy intsony ny fihavanana, na ny mifampiarahaba aza mety tsy ho atao intsony. Koa heveriko fa matoa hampihatra ny didim-pitsarana no nahatongaan’ireo mpitandro ny filaminana ireo dia tsy maintsy efa nisy ny ady teny amin’ny fitsarana ary efa resy ny fokonolona. Mety ho efa nandalovana avokoa ny ambaratongam-pahefana rehetra. Hevitra ihany anefa ny ahy iny fa tsy fantatra izay tena fandehan’ny raharaha… afa-tsy hoe miverina mamaky indray mandeha ny anton-draharaha angaha!
21 Jolay 2008, 20:27
Ialantsiny be raha toa izao vao afaka manome hevitra mikasika ity raharaha ity. Nahita maso ny talohan’ny fitrangan’ny raharaha ny tena ka aleo ihany mba manolotra hevitra e! Tsy nisy namboly io tany sy manodidina azy io (farihy Mahiatrondro) afa-tsy ireo trano tokony ho 13 tafo alohan’ny hamonjena ny fiolahana ho any Itasy iny!
Tampotampoka teo anefa, rindrimbato be no namefy ny tanàna ary gaga ireto olona teo an-tanàna nilazan fa tokony hiala fa misy tompony ny tany (io ilay mpanana voalazanareo)
Ny tiako iaviana dia izao :
1) Olana ho antsika malagasy ny Tany satria lalàna lova tamin’ny fananjanahantany no mbola iainana hatramin’izao
2) Voafehin’ny tany anefa ny Fampandrosoana antsika, izany no mahatonga ny Firenena ho mahantra satria ny Tantsaha ifotoran’ny Harin-karena dia mahantra noho ny tsy fananany Tany izay sarotra ny fahazoana azy. Toy izao no fisehony : 0,20 ha isan’olona ny tany volen’ny Tantsaha iray raha atao indray mijery, 0,7% no fitombon’ny Tany volena nandritra ny 30 taona ary ny Tany voavoly dia 5% ny Tany azo volena manerana ny Nosy.
Miainga avy amin’ireo antontan’olana (problématique) ireo no nananganay Paikady ho Fampandrosoana Maharitra miantehitra amin’ny Fananantany eto Madagasikara. Tohankevitra efa vita ny andiany voalohany ary nahazo ny Fankatelemana feno avy amin’ireo Mpitsara. Mbola eo an-dàlana mameno ny fomba ho enti-manatanteraka azy aho ka aleo aloha tsy ilaza volana alohan’ny biby.
Fa ny fantatro dia betsaka ny làlana sy paikady madinika aleha alohan’ny ahatongavana amin’izany! Niara-niasa ela tamin’ny Tantsaha aho sady manana fiaviana Tantsaha izany no mahatonga ahy nanokana fotoana hanaovana ny Fikarohana io.
09 Desambra 2010, 18:48
@Rado > tena mangetaheta izay tohiny avy aminao izahay rha azo atao indrindra, momba io resaka fananan-tany io. Olana iray isan’ny mba mahaliana ahy mantsy izy io
03 Janoary 2011, 08:43